Nin dhowr sanno ka hor geeriyooday oo laga doonay Canshuurtii ku baaqatay !!! – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Nin dhowr sanno ka hor geeriyooday oo laga doonay Canshuurtii ku baaqatay !!!
Saraakiil ka tirsan Waaxda Canshuuraha ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegay inay tageen dhismo ku yaalla degmadda Sampierdarena ee magaalladda Geneo ee W/galbeed Talyaaniga si ay u soo raraan qalabka guriga ee uu lahaa nin ay ku baaqatay casnhuurihii ku waajibay.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa shalay (Talaado) baahiyey in maydka nin hawlgab ahaa oo la oran jirey Falavio Vargui laga helay gurigiisa.
Shaqaalihii Canshuuraha ayaa u yeeray Boliska markii uu ninka furi waayey albaabka, waxaana la jebiyey albaabkii.
Markii ay gurigii gudaha u galeen ayaa waxay la kulmeen dhacdo ay ka argagaxeen, halkii ay iska lahaayeen “Soo qaada Alaabta Guriga” ayey waxay arkeen haraagga maydkii ninkii ay baadi-goobayeen oo yaalla Kushiinka.
Boliska waxay maydka dhinaciisa ka heleen Kalendar ku asteysnaa sannadkii 2008-dii, gaar ahaan bisha February.
Baaritaano hordhac ah ayaa muujiyey inaysan maydka ku oolin wax calaamado dagaal, waxayna Boliska tuhunsan yihiin inuu Marxuumka si caadi ah u gereiyooday sannadkii 2008-dii isagoo 76-jir ahaa.
Asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa Degmadda Sardinia, wuxuuna Iskaabulanimo dhowr sanno ugu noolaamagaalladda Genoa oo ah caasimadda Gobalka Liguna, waana magaalladda lixaad ee ugu weyn dalka Talyaaniga.
Dadka deriska la ahaa ayaa ku tilmaamay inuu ahaa Oday xishood badan, isla markaana uu u sheegay inuu doonayo inuu u wareegi doono Hoyga dadka Hawlgabka ah.
Dhinaca kale, dhacdo aan tan ka fogeyn, sannadkii hore waxaa W/bari Talyaaniga laga helay maydka Haweeney u dhalatay dalka Faransiiska, taasi oo geeriyootay lix sanno ka hor
Sidoo kale, bishii January ee sannadkii hore, Haweeney ku nool W/galbeed ee Talyaaniga waxay maydka hooyadeeda ku kaydisay Firintijeerka, si ay wehel uga dhigato.
Bilowgii sannadkan, Boliska Jarmalka, waxay maydka haweeney ka heleen dhismo, kadib, markii ay gabadheeda ku guul-daraysatay inay soo sheegto inay hooyadeeda geeriyootay shan sanno ka hor.